Accueil > Gazetin'ny nosy > Lalatiana Rakotondrazafy : minisitra “mama sôsy”
Raha fitinina amin’ny voabolana vitsivitsy ity raharaha ity dia fijangajangana, fampirafesana, fahasarotampiaro ary fahafam-baraka. Ankaotra ny faharesen’ny Barea tany Dar Es Salam teo anatrehan’ny ekipam-pirenena tanzanianina, dia niteraka resabe teto amin’ny firenena ihany koa ny raharaha mahakasika ny minisitra Lalatiana Rakotondrazafy (mama sôsy) sy ny vadiny Andry Andriantongarivo izay sekretera jeneralin’ny ministeran’ny angovo. Omaly maraina no nivoaka tao anaty tambazotran-tserasera sôsialy ny vaovao fa saika maty voatifitry ny basy Kalachnikov teny Ambatobe teny ilay mpanakanto fantan-daza Mr Sayda, ary tsy iza no nitifitra azy fa i Andry Andriantongarivo.
Tsy tongatonga ho azy akory izany trangan-javatra izany fa araka ny loharanom-baovao mari-pototra dia fantatra fa fahasarotampiaro diso tafahoatra avy amin’ity vadina minisitra ity no fositra nahatonga izany. Voalaza mantsy fa tsy zakan’i Andry Andriantongarivo mihintsy ny fiarahan’ny vadiny mama sôsy amin’i Mr Sayda kaomorianina ka vahaolana hitany tsara indrindra dia rarafana amin’ny Kalachnikov ity mpanakanto ankafizin’ny tanora ity. Ny alin’ny alatsinainy hifoha omaly talata moa no nitranga teny Ambatobe izany fitifirana izany, saingy noho ny tsy fahaizan’i Andry Andriantongarivo mitàna basy angamba dia tsy voan’ny bala mihintsy i Mr Sayda. Taorian’izay tranga izay dia fantatra fa nitsoaka niafina tao amin’ny hotely “Le Centell” etsy Antanimena ny minisitra Lalatiana Rakotondrazafy sy io mpanakanto io.
Hatramin’ny omaly hariva nanoratana ny lahatsoratra dia tsy fantatra mihintsy izay misy an’i Andry Andriantongarivo fa mbola karohina fatratra. Tsara marihana fa araka ny loharanom-baovao mari-pototra ihany, fantatra fa fitoriana miisa telo mahakasika ity raharaha ity no voarain’ny polisim-pirenena. Ny voalohany dia fitoriana nataon’i Lalatiana Rakotondrazafy amin’ny vadiny noho ny herisetra (violence conjugale). Ny faharoa dia nitory ny minisitra vadiny noho ny fijanganjagana (adultère) i Andry Andriantongarivo, ary ny farany kosa dia fitoriana nataon’i Mr Sayda manoloana ny fikasàna hamono azy teny Ambatobe.
Tsy fantatra moa ny tena antony mahatonga ny minisitra Lalatiana Rakotondrazafy hanana izao fitondran-tena tsy mendrika na manao “mama sôsy” izao fa raha ny fahitana azy dia mety tsy mahavita ny adidiny eny ambony fandriana intsony angamba rangahy vadiny. I Mr Sayda koa tsy mahagaga raha tsy manana olana amin’ny fiarahana amin-dRamatoa minisitra satria mama sôsy tsy manam-paharoa. Ny hira iray nataony tena nampalaza azy aza dia efa milaza hoe : “na dia efa potipotiny aza ny avy any, dia tsy sarotirotiny amin’izany aho. Asa moa raha mbola ho tazonin’ny filoha Rajoelina ao anatin’ny governemanta ao ihany ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy na zavatra faran’izay manaratsy endrika ny fitondrana aza no ataon’izy sy ny vadiny. Ny azo antoka anefa dia tsy ho sahy hanala an’i mama sôsy mihintsy ny filoham-pirenena.